CSV ကို JSONLines သို့ပြောင်းပါ - ဇယားဘာသာပြောင်း အွန်လိုင်း
CSV ကို JSONLines သို့ပြောင်းပါ
ဤ converter ကို CSV (အော်တို detect delimiter) ကို JSONLines သို့ပြောင်းရန်အသုံးပြုသည်
CSV သို့ပြောင်းလဲဖို့ JSONLines ကုဒ်ပြင်ဆင်ပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ data ကိုမဆိုသိမ်းဆည်းထားမည်မဟုတ်။
တစ်ဦး Excel ကဲ့သို့အယ်ဒီတာသို့မဟုတ်ဆောက်အလွယ်တကူပြင်ဆင်ရန်ယခင်များ၏ CSV data တွေကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
URL မှ CSV ထုတ်ယူပါ
ဘယ်လို Convert CSV to JSONLines အွန်လိုင်းလော
1. လွှတ်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်သင့် CSV paste
သင်၏ CSV_8 ဒေတာကို paste သို့မဟုတ် upload CSV ကိုနှိပ်ပြီး CSV_8 ဖိုင်ကိုဖွင့်ပါ။ CSV ဖိုင်ကိုဆွဲယူပါ။ CSV delimiter အတွက်စိတ်မပူပါနဲ့, converter က delimiter ကိုအလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ကော်မာ, ဘန်, အူမကြီး, semicolon, ပိုက်, ပါးလွှာ, ပါးလွှာ,
2. Edit ကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာသင့် CSV, လိုအပ်လျှင်
CSV သည်ကော်မာခွဲခြားထားသောတန်ဖိုးများကိုဆိုလိုသည်။ CSV file format သည် text format ဖြစ်ပြီးအချက်အလက်များကိုစားပွဲတင်ပုံစံဖြင့်သိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည့်တိကျသောပုံစံတစ်ခုရှိသည်။
CSV မှ ActionScript မှ
CSV ကို ActionScript ခင်းကျင်း သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ ASCII မှ
CSV ကို ASCII ဇယား သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ AsciiDoc မှ
CSV ကို AsciiDoc ဇယား သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ ASP မှ
CSV ကို ASP Array သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ BBCode မှ
CSV ကို BBCode ဇယား သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ CSV မှ
CSV ကို CSV သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ Jira မှ
CSV ကို Jira စားပွဲတင် သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ JPEG မှ
CSV ကို JPEG စားပွဲတင် သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ JSON မှ
CSV ကို JSON Array သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ HTML မှ
CSV ကို HTML ဇယား သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ Markdown မှ
CSV ကို Markdown ဇယား သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ MediaWiki မှ
CSV ကို MediaWiki ဇယား သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ PHP မှ
CSV ကို PHP Array သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ LaTeX မှ
CSV ကို LaTeX ဇယား သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ PDF မှ
CSV ကို PDF ဇယား သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ reStructuredText မှ
CSV ကို reStructuredText ဇယား သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ SQL မှ
CSV ကို SQL ထည့်ပါ သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ Ruby မှ
CSV ကို Ruby array သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ Textile မှ
CSV ကို Textile စားပွဲတင် သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ XML မှ
CSV ကို XML သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ YAML မှ
CSV ကို YAML sequence ကို သို့ပြောင်းပါ
CSV မှ Template မှ
CSV ကို template ဇယား သို့ပြောင်းပါ
HTML မှ CSV မှ
HTML ဇယား ကို CSV သို့ပြောင်းပါ
JSON မှ CSV မှ
JSON Array ကို CSV သို့ပြောင်းပါ
LaTeX မှ CSV မှ
LaTeX ဇယား ကို CSV သို့ပြောင်းပါ
Markdown မှ CSV မှ
Markdown ဇယား ကို CSV သို့ပြောင်းပါ
MediaWiki မှ CSV မှ
MediaWiki ဇယား ကို CSV သို့ပြောင်းပါ
SQL မှ CSV မှ
SQL ထည့်ပါ ကို CSV သို့ပြောင်းပါ